Dr. Zaw Sein Lwin – Healthy Life Journal
Posts By Dr. Zaw Sein Lwin
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါက အသက် ၆၅နှစ်ကျော်ရင် အဖြစ်များပေမယ့် အသက် ၆၅ နှစ်အောက်မှာလည်း ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ သူငယ်ပြန်...
အမေရိကားတွင်အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက်အကြမ်းဖက် ပစ်ခတ်ချင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ရသည့်အခြေခံအကြောင်းရင်း
မေး ။ ။ အမေရိကားမှာ အစုလိုက်၊ အပြုံလိုက် အကြမ်း ဖက်တာ၊ သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်တာတွေ ကြားသိနေရ ပါတယ်။ ဒါတွေဘာ ကြောင့် ဖြစ်ရတာပါလဲ ဆရာ ( ဦးသူရမင်း၊ ပြည် ) ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း)...
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အရက်သောက်သူတစ်ဦးကြောင့် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့အခါ . . .
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း အလုပ်ထဲကပြဿနာကို အိမ်ကိုမသယ်နဲ့၊ အလုပ်ထဲမှာပဲထားခဲ့ . . လို့ပြောကြပေမယ့် ကျွန်မမနေနိုင်လို့ ဒီစာရေးလိုက်ရတာပါဆရာ။ ကျွန်မကအလုပ်မှာ စာရင်းကိုင်လုပ်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်မတို့အလုပ်က နယ်တစ်ခုမှာရုံးခွဲအနေနဲ့ ဖွင့်ထားတာဆိုတော့ ကျွန်မတို့နယ်ရုံးခွဲမှာ မန်နေဂျာအစ်ကို ကိုထွန်း (နာမည်လွှဲထား)က...
သားသမီးအတွက် ပူပင်လွန်းလို့ ည ည အိပ်မပျော်နိုင် . . .
မေး. ည ညဆို သားလူပျို အိမ်ပြန်မရောက်သေးရင် လမ်းမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုပြီး ကျွန်မစိတ်ပူမိတယ်ဆရာ၊ အိမ်ထောင်သည် သမီးအတွက်ကျပြန်တော့ သူ့ယောက်ျားနဲ့ အဆင်ပြေပါ့မလားဆိုပြီး ပူပန်မိပြန်ရော ဆရာ၊ သူတို့အတွက် ငွေရေးကြေးရေးတင်မက လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေအထိ အစစအရာရာ ကျွန်မပူပင်နေရပါတယ်။ အဲဒီလိုစိတ်နဲ့ ကျွန်မဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ ည...
ကြွားဝါတတ်တဲ့သူ . . .
မေး။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တချို့လူတွေက တကယ်တမ်းကျတော့ ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့် ဘ၀င်မြင့်ပြီး လူတိုင်းကို ကြွားဝါချင်နေတာ၊ စကားကို လေကြီးမိုးကြီးတွေ ပြောတတ်တာ တွေ့တွေ့နေရပါတယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးက စိတ်ရောဂါဖြစ်နေတာလား။ ကိုထွဋ်၊ ကျောက်တံတား။ ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် ဆေးရုံအုပ်ကြီး(ငြိမ်း) စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။...
ထစ်ခနဲရှိ ဒေါသထွက်နေတယ် . . .
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဒေါသဖြစ်သည့် အကြောင်းရင်းများ ဒေါသဖြစ်တဲ့ အကြောင်းရင်းက လေးချက်ရှိပါတယ်။ (၁) အလိုမပြည့်ရင်လည်း ဒေါသဖြစ်တယ်၊ (၂) မျှော်လင့်ချက်နဲ့ လက်တွေ့နဲ့ကွာဟတာကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်ရင်လည်း ဒေါသဖြစ်တယ်၊ (၃) အလိုလိုနေရင်း ထစ်ခနဲရှိ ဒေါသနဲ့တုန့်ပြန်တတ်တဲ့...
သူငယ်ပြန်မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းသည့် ရောဂါ (Dementia)
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း၊ စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း မေး. Dementia အကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. Dementia ကို ဆေးပညာအရ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းတဲ့ရောဂါလို့ ခေါ်ပေမယ့် အရပ်အခေါ်မှာတော့ သူငယ်ပြန်ရောဂါလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်းတဲ့ရောဂါမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အကြောင်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။ (၁)...
စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါ Schizophrenia ရှိသူကို ရဲဝံ့ကြင်နာစောင့်ရှောက်ပါ . . .
ဒေါက်တာဦးဇော်စိန်လွင် (ဆေးရုံအုပ်ကြီး-ငြိမ်း) စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးမှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ မေး. စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါအကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. Schizophreniaကို ဆရာကြီး တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်က အနုပညာရသမြောက်အောင် စိတ်ကစဉ့်ကလျားရောဂါဆိုပြီး နာမည်ပေးခဲ့တာပါ။ ဆရာတို့စိတ်ကျန်းမာရေး ဆရာဝန်တွေကတော့ စကီဇိုဖရန်းနီးယား (Schizophrenia)ဆိုပြီးပဲ ဝေါဟာရသတ်မှတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက ရှေးဦးကတည်းကရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ သမိုင်းကြောင်း...
ကလေးက ပုံမှန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား . . .
မေး ။ ကျွန်မ ကလေးက အသက် လေးနှစ်ပါ။ အငြိမ် မနေပါဘူး၊ စကားလည်း များတယ်၊ တစ်ခါ တစ်ခါ ဘာတွေ ပြောမှန်း မသိပါဘူး၊ တစ်ခါတလေ လူကြီး စကားတွေလည်း ပြောတယ်။ တခြားကလေးတွေနဲ့ မတူဘူးလို့ ကျွန်မ...